New Snapdragon 870 maka ọnụ ala dị elu ọnụ ala: njirimara ya niile | Gam akporosis
Qualcomm weputara Snapdragon 870 maka mkpanaka di elu karie onu ahia
Qualcomm emeela njem na-atụghị anya ya nke na-ejighị ya na ọgbọ ndị gara aga. Ma ọ bụ na, ihe karịrị otu ọnwa kemgbe ọ malitere Snapdragon 888, chipset ya kachasị ike maka njedebe dị elu nke 2021, amalitelarị ụdị ya - ọ bụrụ na ị nwere ike ịsị ya - obere obere, nke na-abịa Snapdragon 870 ọ ga-abụkwa nke igwe na-ejegharị ejegharị ga-eji dị obere belata.
Na ajụjụ, Ekwentị niile na-abata na Snapdragon 870 ga-adị ọnụ ala karịa ndị nwere Snapdragon 888, mgbe ha na-adị elu, n'ihi ya, ha ka ga-arụ ọrụ kachasị elu.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Snapdragon 870
1.1 Ekwentị izizi nwere ịnwe ya sitere na Motorola
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Snapdragon 870
Iji malite, anyị na-ele anya na mpempe enweghị node nm 5 nke anyị na-ahụ na Snapdragon 888. Iji mee ka ọnụ ahịa ya belata, ndị ụlọ ọrụ semiconductor enyela ya a 7nm usoro FinFet, nke ka dị oke mma na arụmọrụ ike, ma ọ bụghị dị ka nke 5 nm, nke na-anọchite anya mmelite na ngalaba a.
Ihe ọzọ bụ na Njikọ 5G ka edobere na Snapdragon 870, olee otu o si adi na uzọ ozo; ebe a anyị nwere ndakọrịta na netwọk SA na NSA zuru ụwa ọnụ maka modem X55 nke ọ na-ebu, nke dakọtara na 4X4 MIMO ma na-enye nbudata kachasị na ibudata ọsọ ọsọ ruo 7.5GB / s na 3GB / s. Atụmatụ a bụ mgbakwunye na WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, Bluetooth aptX, na nkwado maka NFC. Maka nhazi ala, anyị nwere GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC na SBAS.
Ugbu a, ịgagharị na otu n'ime isi ihe kachasị mkpa nke ikpo okwu mkpanaka ọhụrụ, ọ dị mkpa ịkọba na ọ nwere isi asatọ. Isi bụ a Cortex-A77 ma rụọ ọrụ na oge elekere kachasị nke 3.2 GHz. Atọ ndị ọzọ bụ Cortex-A77 wee gaa na 2.4 GHz, ebe mmadụ anọ ikpeazụ, ndị lekwasịrị anya na ọrụ ndị dị mfe, bụ Cortex-A55 ma rụọ ọrụ n’ihe dịka 1.8 GHz.
Ihe eserese eserese - nke a makwaara dị ka GPU Adreno 650, otu ihe anyị nwetara na Snapdragon 865 site na afọ gara aga. Nke a na - ekwe nkwa ịrụ ọrụ ịgba chaa chaa dị mma, yana isiokwu nhazi ihe onyonyo na ihe niile metụtara multimedia, dịka atụmatụ dịka OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1 na DirectX 12 gụnyere.
Na-agbaso isiokwu egwuregwu ahụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na Snapdragon 870 nwere Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, ọ dakọtara na mmeputakwa nke ezi egwuregwu HDR, yana omimi agba agba 10-bit na agba agba 2020. Ọzọkwa, ndị GPU niile na-achịkwa Ha bụ upgradeable, ya mere ha ga-emeghe oghe njikarịcha na arụmọrụ ndozi, na-enweghị mkpa imelite mobile OS n'onwe ya.
Maka kaadị ebe nchekwa, chipset processor na-akwado LPDDR4X na LPDDR5 RAM kaadị, ndị kasị elu maka mobiles. Ọ na-akwado ọsọ ọsọ elekere nke 2750 MHz na ikike kachasị 16 GB nke RAM. N'otu oge ahụ, ọ na-akwado UFS 3.1 ụdị ROM ebe nchekwa.
Banyere nchekwa na nzuzo na ịmeghe nhọrọ, enwere nkwado maka ịgụ akara mkpịsị aka, mmata iris, ihu ihu, na njirimara olu. N'echiche a, ikpo okwu mkpanaka nwere Qualcomm Mobile Secutiry.
N'ihe ngosipụta, Snapdragon 870 dakọtara na ogwe aka na mkpebi 4K na 60 Hz ume na QuadHD + (2K) na 144 Hz, yana HDR10 na HDR10 +, na 10-bit agba omimi. Maka teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa, enwere nkwado maka Ndenye Ntanye 4+ ma ọ bụghị Ndenye Ntanye 5, nke bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke a ma dị na Snapdragon 888.
Maka foto, onye nhazi ihe nhazi nwere ike iji otu ihe mmetụta nke ihe ruru 200 MP, ngwa ngwa nke 720p na 980 fps na ndekọ vidiyo na 8K.
Ekwentị izizi nwere ịnwe ya sitere na Motorola
Ekwenyebeghị smartphones ndị mbụ iji kwadebe Snapdragon 870, ma e wezụga Motorola Moto Edge S, nke ga-abụ onye mbụ ịhapụ ya. A ga-emepe ekwentị a na Jenụwarị 26.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Qualcomm weputara Snapdragon 870 maka mkpanaka di elu karie onu ahia
A ga-ebido Motorola Moto Edge S na Jenụwarị 26 dị ka ọnụ ala dị ọnụ ala
'Szụta Fitbit nke Google gwụchara